October 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
October 12, 2021 Puntland Mirror 0
Hague-(Puntland Mirror) Maxkamada Caalamiga ee Cadaalada (ICJ) ayaa inta badan Soomaaliya u xukuntay muranka badda kala dhaxeeya Kenya, iyadoo xuduud badeed ka sameysay qeyb kamid ah Badweynta Hindiya oo la rumeysan yahay inay hodan ku […]
October 7, 2021 Puntland Mirror 0
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Wasiirka Amniga maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa is-casilaadiisa u gudbiyay Madaxweyne Qoor-qoor, sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ka galabta oo Khamiis ah. Waxa uu ku sababeeyay iscasilaadiisa […]
October 3, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa soo dhaweysay ku dhawaad 758 qof oo Somaliland ay kasoo masaafurisay magaalada Laascaano, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Puntland. “Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay bannaanka magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweysay […]
October 2, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah u magacaabay Cawil Maxamed Xasan oo loo yaqaan Cawil Mataan guddoomiyaha gobolka Nugaal, sida lagu digreeto ka soo baxday madaxtooyada. Cawil Mataan […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Sabti ah magacaabay guddi si ay uga soo talobixiyaan amniga magaalooyinka Puntland gaar ahaan caasimada Garoowe. Guddiga oo ka kooban saddex xubnood ayaa kala ah: […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ee ku sugan Africa ayaa sheegay in ay qaadeen duqeyn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay magaalo xeebeedka Xaradheere ee gobolka Mudug. Duqeynta ayaa dhacday 12 Oktoobar, iyada oo [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haweenaydii is-qarxisay oo dishay duqii Muqdisho iyo lix qof oo kale ayaa ahayd indhoolad, taasoo ka shaqayn jirtay dowladda hoose ee Muqdisho, wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidaa ku sheegtay war-saxaafadeed maanta [...]